Chechi Yechokwadi Inogona Kukubatsira Nokusingaperi!
CHIKAMU 1 Machechi Ose Anodzidzisa Chokwadi Here?
CHIKAMU 2 Ungadzidza Sei Chokwadi Pamusoro paMwari?
CHIKAMU 3 Ndivanaani Vanogara Kudenga?
CHIKAMU 4 Madzitateguru Edu Ari Kupi?
CHIKAMU 5 Chokwadi Pamusoro Pemashiripiti Nouroyi
CHIKAMU 6 Mwari Anofadzwa Nemachechi Ose Here?
CHIKAMU 7 Ndivanaani Vari Muchechi Yechokwadi?
CHIKAMU 8 Ramba Chechi Yenhema; Namata Muchechi Yechokwadi
CHIKAMU 9 Chechi Yechokwadi Inogona Kukubatsira Nokusingaperi!
Mugwagwa Unoenda Kuupenyu Husingaperi—Wakauwana Here?
SARUDZA MUTAURO Abbey Acholi Afrikaans Amharic Attié Baoule Batak (Karo) Bissau Guinean Creole Boulou Chirungu Chitonga Cibemba Damara Douala French Ga Haitian Creole Indonesian Italian Kinyarwanda Kwanyama Luganda Ngangela Nyungwe Nzema Oromo Portuguese Rutoro Shona Sidama Spanish Tigrinya Urhobo Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba
1. Chii chichaitika kana ‘tikaswedera pedyo naMwari’?
JEHOVHA anoda vaya vanomushumira. Kana ukanamata Jehovha, achakukomborera iye zvino nomunguva yemberi. Bhaibheri rinoti: “Swederai pedyo naMwari, uye achaswedera pedyo nemi.”—Jakobho 4:8.
2. Tingaswedera sei pedyo naMwari, uye izvi zvichaita kuti minyengetero yedu iitwe sei?
2 Kuti uswedere pedyo naMwari, unofanira kudzidza ndokushandisa Shoko rake. Paunonyengetera maererano nokuda kwake, Jehovha achateerera minyengetero yako oipindura. Muapostora wechiKristu Johani akanyora kuti: “Ichi ndicho chivimbo chatinacho [kuna Mwari], kuti, zvisinei nokuti chii chatinokumbira maererano nokuda kwake, anotinzwa. Uyezve, kana tichiziva kuti anotinzwa pamusoro pezvinhu zvose zvatinokumbira, tinoziva kuti tichawana zvinhu zvakumbirwa sezvo tazvikumbira kwaari.”—1 Johani 5:14, 15.
3-7. Tingawana sei uchenjeri hwaMwari, uye hungatibatsira sei?
3 Uyezve, sezvaunoswedera pedyo naMwari, achakupa uchenjeri hwokubata nenhau dzemazuva ose dzoupenyu. Bhaibheri rinoti: “Kana upi noupi wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaarambe achikumbira Mwari.”—Jakobho 1:5.
4 Uchenjeri hwaMwari hunogona kukubatsira sei? Chimwe chinhu chahunokubatsira, kuziva zvinhu zvisingafadzi Jehovha. Unogonawo kuziva kuti nei zvinhu izvi zvisina kururama uye zvaunogona kuita kuti urege kuzviita. Zivo yakadaro inogona kukudzivirira pazvinetso zvinotambudza vanhu vakawanda. Somuenzaniso, kuteerera zano raMwari rokuva netsika dzakachena kunobatsira kudzivirira vanhu vaMwari kuti vasave nepamuviri pasingadiwi, zvirwere zvinopfuudzwa pabonde, michato isingafadzi kana kuti inoparara.
5 Uchenjeri hunopiwa naMwari hunogona kukuitirazve chii? Hunogona kukuita kuti ukwanise kuwana zvakanakisisa muupenyu. Hunogona kukubatsira kuita zvisarudzo zvokuchenjera munhau dzinokosha, zvakadai sokuronga mashandisiro aungaita mari yako. Unozokwanisa kuita vavariro dzinokosha worega vavariro dzisingakoshi.
6 Uchenjeri hwaMwari hunogonawo kukubatsira muukama hwako nevamwe. Unogona kuva noupenyu hwemhuri hunofadza kwazvo. Unogona kutanga ushamwari hwechokwadi, uye husingaperi nevamwe, uye unogona kuremekedzwa, kunyange nevaya vasinganamati Mwari.
7 Uyezve, kuva kwako nouchenjeri hwaMwari kuchakubatsira kuita kuti maonero aunoita upenyu avandudzike. Kuchakubatsira kurarama nezvinetso zvoupenyu nokuora mwoyo kwaunganzwa. Uyezve, uchaona remangwana zviri pakati nepakati, uye netariro. Maonero ane tariro achabatsirawo kuti uve noutano hwakanaka hwendangariro nomuviri.—Zvirevo 14:30; Isaya 48:17.
8. Kana uchishumira Mwari, chii chausingazotyi?
8 Kana ukashumira Mwari wechokwadi, uchasununguka pakutya kunotambudza vaya vasingamushumiri. Nokuti unoziva kuti vakafa havasi vapenyu muguva, hauzotyi vakafa. Nokuti unovimba nechipikirwa chaMwari chokumutsa vakafa, hauzotyi kufa. Uye sezvo uchiziva kuti Mwari ane masimba ose, hauzotyi kuroyiwa.—Johani 8:32.
Vakarurama Vachava Varidzi Vepasi
9-11. Ndivanaani vachagara muparadhiso, uye ndivanaani vasingazogarimo?
9 Kana ukaswedera pedyo naMwari, hauzotyi remangwana. Sezvataona, Bhaibheri rakafanotaura zvinetso zvakawanda zvatinoona panyika nhasi. Jehovha anotiudza kuti zvinhu izvi ndezvenguva pfupi; Umambo hwaMwari nokukurumidza huchaita pasi rino paradhiso.—Ruka 21:10, 11, 31; 23:43.
10 Vaya vanoswedera pedyo naJehovha vomushumira ndivo chete vachararama muParadhiso. Bhaibheri rinoti: “Kwasara chinguva chiduku, wakaipa haachazovipo; zvirokwazvo, iwe uchacherekedza zvakanaka paaigara, asi haachazovipo. Asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika; ndivo vachafarikanya kwazvo norugare rukuru.”—Pisarema 37:10, 11.
11 Vaya vanoomesa mitsipa vachiramba kuteerera mitemo yakarurama yaMwari vachafa zvokusazomboonekwazve. (2 VaTesaronika 1:8, 9) Havazovikozve. Vachabatana naSatani nemadhimoni ake murufu rwokusingaperi. (Zvakazarurwa 20:10, 14) Asi vaya vanodzidza nezvaJehovha vomushumira vachafara kwazvo muParadhiso pasi pano.
12. Bhaibheri rinoti chii nezveremangwana?
12 Jehovha ane zvinhu zvakaisvonaka zvaakachengetera vaya vanomuda! Imboona zvinotaurwa neShoko rake nezvoupenyu muParadhiso pasi pano:
Zvokudya zvakawanda: “Kuchava nezviyo [kana kuti zvokudya] zvizhinji pasi pamusoro pamakomo.”—Pisarema 72:16.
Dzimba dzakanaka: “Vachavaka dzimba nokugaramo.”—Isaya 65:21.
Basa rinonakidza: “Vasanangurwa vangu vachapedza nguva huru vachifarira mabasa amaoko avo. Havangabatiri zvisina maturo.”—Isaya 65:22, 23.
Hapana kurwara: “Hakuna ugeremo, uchati: Ndinorwara.”—Isaya 33:24.
Hapana kuremara: “Ipapo meso amapofu achasvinudzwa, nenzeve dzematsi dzichadziurwa. Ipapo unokamhina uchakwakuka senondo, rurimi rwembeveve ruchaimba.”—Isaya 35:5, 6.
Hapana kurwadziwa, kusuruvara, rufu: “[Mwari] achapukuta misodzi yose pamaziso avo, uye rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipo. Zvinhu zvokutanga zvapfuura.”—Zvakazarurwa 21:4.
Hapana hondo: “[Mwari] unogumisa kurwa kusvikira pakuguma kwenyika.”—Pisarema 46:9.
Upenyu Husingaperi: “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagaramo nokusingaperi.”—Pisarema 37:29.
13. Ndiani chete anogona kuita kuti pasi rino rive paradhiso, uye nei?
13 Vanhu havagoni kuita kuti zvinhu zvakadaro zviitike, asi Jehovha ane simba rokuita chero chaanoti achaita. Hapana chinomutadzisa kuita zvaanoda kuita. Bhaibheri rinoti: “Kuna Mwari hapana chinoziviswa chichava chisingabviri.”—Ruka 1:37.
14. Ungapinda sei mumugwagwa unoenda kuupenyu husingaperi?
14 Achishandisa Zvapupu zvake, Jehovha ari kupa vanhu kwose kwose mukana ‘wokupinda nepasuo rakatetepa’ uye wokufamba nomumugwagwa unoenda kuupenyu husingaperi. Iva pakati pevanhu vanofara vanogamuchira kukoka uku. Namata muchechi yechokwadi wowana chikomborero chaJehovha nokusingaperi!—Mateu 7:13, 14.
Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?—Vhidhiyo Refu?
Kuziva kwaunoita Mwari neShoko rake kungabatsira sei vamwe? Ungava noukama hwakaita sei naMwari?